Ikhaya Uhlelo lozakwethu abahlangene
Uhlelo lokusebenzisana luyithuba elihle lokuthi uzuze imali ngokuthengisa imikhiqizo yesoftware yethu ethola imiklomelo. Samukela noma ngubani, kubantu ngabanye, amabhizinisi amancane kuya komagazini, izingosi, nezitolo.
DataNumen uhlelo lokuhambisana lungcono kakhulu. Kungani?
Ikhomishini ephezulu, uhlelo lwamaphesenti oluguquguqukayo.
Ekuthengiseni ngakunye okwenzayo, uhola kungengaphansi kuka-20% wenani lokuthengisa eliphelele. IKhomishini iyanda ngokuya ngokusebenza kwakho! Umthamo wokuthengisa ophakeme wemikhiqizo yethu yokutakula idatha, iphesenti lakho lizoba likhulu ngokwengeziwe.
DataNumen imikhiqizo ithandwa kakhulu.
Kungakho sikunikeza isiqinisekiso esiqinile sezinga eliphezulu lokuthengisa. Njengomholi womhlaba kubuchwepheshe bokutakula idatha, sesithengise isoftware yethu ewina imiklomelo yokuthola idatha emazweni angaphezu kwe-130. Amakhasimende ethu asukela kumqali wamakhompiyutha kuya kubaxhumanisi abangochwepheshe be-IT kanye nabanikezeli bensizakalo yokuthola idatha, kusuka ezinhlanganweni ezincane kuya kumabhizinisi amakhulu kufaka phakathi inhlanhla engu-500. Empeleni, wonke umsebenzisi wekhompyutha angaba nesidingo emikhiqizweni yethu yokutakula idatha.
Ukusekelwa okugcwele kolwazi.
Ukuba inxusa lethu, uthola imininingwane ebaluleke kakhulu futhi ewusizo:
isilinganiso sokuthengwa nokulanda (isilinganiso sokuguqulwa) sayo yonke imikhiqizo,
izenzo zethu zokukhangisa ezizayo nezaphulelo,
imikhiqizo yethu ethengisa kakhulu.
Ukwenza lokhu kwenzeke, senza izindaba ezikhethekile kosting for affiliates and support closed closed affiliate information with a lot of marketing information regarding our products. Kuzokusiza ukuthi ukhethe imikhiqizo ehamba phambili ezothengiswa kusayithi lakho, ukwandise ukumaketha kwakho, bese uqhathanisa ukusebenza kahle kokuthengisa.
Amaphakeji agcwele wezinto zokwenyusa.
Zonke izinto zokwenyusa zayo yonke imikhiqizo (enjengencazelo, ukukhangisa kanye nezindlela zokuxhumana, amabhanela, imiklomelo, izibuyekezo, imibono yekhasimende engcono kakhulu, ukuxoxisana nabathuthukisi nokunye okuningi) kuhlala kutholakala kozakwethu. Ngeke usebenzise isikhathi esiningi lapho usesha isibhengezo noma isithombe osidingayo kusayithi.
Imikhankaso yokukhangisa ebambisene nezenzo zokumaketha.
Singaqhubeka nemikhankaso yokukhangisa ebambisene nawe. Kunezintengo ezikhethekile zabalingani, kanye nezaphulelo eziningi, ukuthengiswa kwamaholide, i-imeyili eqondile nokunye okuningi. Ungahlala wenza isicelo sokuthola izinto zokukhangisa zanoma yiluphi uhlobo. Ungathembela futhi ekwandisweni kwamaphesenti ekhomishini lapho uhlela izindaba posting, imikhankaso yokukhangisa, nezenzo zokumaketha. Kwesinye isikhathi size sikhokhele ingxenye yezenzo ezinjalo. Unombono? Xhumana nathi!
Ukusekelwa okusheshayo kuhlala kutholakala.
Noma yimiphi imibuzo, iziphakamiso kanye nezicelo kuzobhekwa futhi uzothola impendulo esezingeni eliphakeme ngesikhathi esifushane ngangokunokwenzeka. Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu lethu lokuphendula ukubuza noma imuphi umbuzo noma wenze isicelo mayelana nohlelo lwethu lobulungu.
Ngemuva kokuthi ubhalise ngohlelo lwethu lokuhambisana, sizokunikeza i-ID yokuxhumana.
Ngale ID yokusebenzisana, ungakha isixhumanisi se-oda esihlukile sanoma yimuphi omunye wemikhiqizo yethu. Uma ikhasimende lakho lithenga ngalesi sixhumanisi se-oda eliyingqayizivele, lapho-ke sizokubona ukuthunyelwa kwakho bese sikhomba ukuthi ikhomishini ikufake kuwe.
Ngale ID yobulungu, ungaphinda wenze isixhumanisi esiyingqayizivele kunoma yiliphi ikhasi lewebhu kusayithi lenkampani yethu. Uma ikhasimende lakho livakashela ikhasi lewebhu ngalesi sixhumanisi esiyingqayizivele, ikhukhi izogcinwa kukhompyutha yakhe ne-ID yakho yokubambisana egcinwe kuyo. Ngemuva kwalokho, uma ikhasimende lithenga imikhiqizo yethu ngokuhamba kwesikhathi, ikhukhi izokwaziwa futhi uzonikezwa ikhomishini. Ikhukhi isebenza izinyanga eziyi-6 inqobo nje uma ikhasimende lakho lenza isinqumo salo sokuthenga ezinyangeni eziyisithupha selokhu lavakashela okokuqala ikhasi lethu le-web, uzothola ikhomishini ekuthengeni kwayo.
Thola started manje
Uhlelo lwethu lobulungu luphethwe ngu MyCommerce.com futhi SengiSondele.com, bobabili bangabaholi abasunguliwe ezinhlelweni ezihambisana nesoftware. Ungakhetha eyodwa ngokuya ngokuthanda kwakho. Uhlelo lokusebenzisana lulula kakhulu. Akukho okufihliwe costs futhi kunjalo khulula ukubhalisa.
Bhalisa Uhlelo Lokuxhumana Lwe-MyCommerce.com
Bhalisa Uhlelo Lokubambisana lweFastSpring.com
Ngemuva kokubhaliswa, sizokuthumela i-imeyili equkethe i-ID yakho ehambisanayo nemiyalo eya ku-start ukuze ukwazi ukuthola imali ngokushesha!
Uma usuvele unayo i-akhawunti yokubambisana ku-MyCommerce.com noma ku-FastSpring.com, sicela ungene kuphaneli yakho yokulawula bese usithola ukuthi sijoyine futhi start. I-ID yethu yomthengisi iyi- 39118 ku-MyCommerce.com naku datanumen ku-FastSpring.com.